Jade Dynasty (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 5.8/10 559 votes
စာရေးဆရာ Xiao Ding ရဲ့ XianXia အမြိူးအစား Zhu Xian ဝတ်ထုကိုရုပျရှငျအဖွဈပွနျလညျရိုကျကူးထားတာပါ…ခေါငျးဆောငျမငျးသားကတော့ အမှောငျလောကသခငျရိလငျလောငျဂြူလို့ လူသိမြားတဲ့ ရှောငျးကနျြ့ဖွဈပွီး တှဲဖကျမငျးသမီးတှကေလညျးခသေူမဟုတျတဲ့ မုနျ့မိနျခြီ, လီခငျြ့ တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာနျောဒီ ဝတ်ထုကိုအရငျက ဇာတျလမျးတှဲအရှညျအဖွဈ လီရိဖုနျး, ကြောကျလိယငျ, ယနျဇီ တို့ကသရုပျဆောငျခဲ့ပါသေးတယျ။ဇာတျလမျးကတော့ တဈရှာလုံး အသတျခံရပွီး ရှငျကနျြသူ ကနျြးရှောငျဖနျးခငျြယှငျဂိုဏျးအကူအညီနဲ့ နတျတို့ကငျြ့စဉျကို လကေ့ငျြ့ရငျး…. မိဘတို့အတှကျလကျစားခခြေငျြစိတျ လှနျရငျး မိစ်ဆာလမျးစဉျရောကျသှားတဲ့ကနျြးရှောငျဖနျးတဈယောကျအကွောငျးကို သရုပျဖျောတငျဆကျထားတာပါဇာတျလမျးတှဲအနနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား ဇာတျကို အခု တဈပိုငျးတညျးအပွီး ကွညျ့ရမှာဆိုတော့အရငျကွညျ့ခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲထကျ ပိုကောငျးလမေလား… အရသာပဲပေါ့နမေလား…ဇာတျအိမျတှေ အခြိုးအကှတှေ့ပွေောငျးသှားလမေလား… ဇာတျလမျးလေးကွညျ့လိုကျကွပါတော့…
စာရေးဆရာ Xiao Ding ရဲ့ XianXia အမျိူးအစား Zhu Xian ဝတ္ထုကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ…ခေါင်းဆောင်မင်းသားကတော့ အမှောင်လောကသခင်ရိလင်လောင်ဂျူလို့ လူသိများတဲ့ ရှောင်းကျန့်ဖြစ်ပြီး တွဲဖက်မင်းသမီးတွေကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ မုန့်မိန်ချီ, လီချင့် တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာနော်ဒီ ဝတ္ထုကိုအရင်က ဇာတ်လမ်းတွဲအရှည်အဖြစ် လီရိဖုန်း, ကျောက်လိယင်, ယန်ဇီ တို့ကသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဇာတ်လမ်းကတော့ တစ်ရွာလုံး အသတ်ခံရပြီး ရှင်ကျန်သူ ကျန်းရှောင်ဖန်းချင်ယွင်ဂိုဏ်းအကူအညီနဲ့ နတ်တို့ကျင့်စဉ်ကို လေ့ကျင့်ရင်း…. မိဘတို့အတွက်လက်စားချေချင်စိတ် လွန်ရင်း မိစ္ဆာလမ်းစဉ်ရောက်သွားတဲ့ကျန်းရှောင်ဖန်းတစ်ယောက်အကြောင်းကို သရုပ်ဖော်တင်ဆက်ထားတာပါဇာတ်လမ်းတွဲအနေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ဇာတ်ကို အခု တစ်ပိုင်းတည်းအပြီး ကြည့်ရမှာဆိုတော့အရင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲထက် ပိုကောင်းလေမလား… အရသာပဲပေါ့နေမလား…ဇာတ်အိမ်တွေ အချိုးအကွေ့တွေပြောင်းသွားလေမလား… ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်လိုက်ကြပါတော့…
Option2usersdrive.com 478 MB SD (480p)
Option3megaup.net 478 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 478 MB SD (480p)
Option5sharer.pw 478 MB SD (480p)
Option6uptomega.com 478 MB SD (480p)
Option 8 usersdrive.com 1.1 GB HD (1080p)
Option 11 megaup.net 1.1 GB HD (1080p)
Option 12 storage.msubmovie.com 2.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 14 sharer.pw 2.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 16 usersdrive.com 2.8 GB FHD (1080p) DTS 5.1